कुनैपनि महिलासँग बिबाह गर्नुपहिले ध्यान दिनुस यी ४ कुरा, नत्र जीवनभर दु:ख पाइन्छ !
- नेपाली सन्देश आइतवार, बैशाख २३, २०७५ , 5K जनाले हेर्नुभयो
मानिसको जीवनमा सुख भए स्वर्ग र दु:खनै दु:ख र कलह भए नर्क समान मान्ने गरिन्छ । कतिपय मानिसले भन्ने गरेका छन् कि जिउँदो छँदानै मानिस ले स्वर्ग वा नर्क भोग्ने गर्छ, मरेपछि त शुन्यता मात्र हो । साच्चै मानिसको जीवनमा हरेक दिनको सुखभोगले महत्व राख्छ जुन कुरा हाम्रो दैनिक व्यवहारसँग सम्बन्धित छ । मानिसको जीवनमा धार्मिक संस्कारको निकै महत्व राख्छ । संस्कारले भनेको सबै राम्रा कुरालाई मानिसले अंगाल्ने हो भने स्वर्ग यही संसारमै छ । धार्मिक संस्कारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्कार मध्ये एक संस्कार हो विवाह । सुखी वैवाहिक जीवनको लागि आवश्यकता पर्छ राम्रो जीवन साथी ।
तल ति ४ कुराहरुको बारेमा जानकारी लिनुहोस् ।
१. दुइपक्षको बीच कुनै नाता नहोस –
कुनैपनि व्यक्तिले त्यस्ता युवतीसँग बिबाह गर्नु हुँदैन जसको आमा बुबासँग केटापक्षको नजिकको कुनै नाता होस् । शास्त्रको अनुसार आपसी नाता वा एकै गोत्रमा विवाह गर्न हुँदैन । यसको कारण जेनेटिक रोग हुने संभावना हुन्छ । जुन युवतीको आमा/बुबाको पांच पुस्ता अघिसम्मको नाता छ भने त्यस्तो अवस्थामा बिबाह गर्नु हुँदैन । त्यसैले बिबाह गर्नु अघि आपसी नाता छ/छैन निकै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
२. खराब पुरुषसँग साथी बनाउनेवाली
३. खराव बोली भएकी
४. अवेरेसम्म सुत्ने बानी भएकी
निकै ढिलासम्म सुत्ने महिलाहरु स्वभावले निकै अल्छी मानिन्छ । बेलुका चाडै सुतेपनि काम नै नभएको अवस्थामा पनि बिहान सवेरै उठ्ने महिलाले परिवारलाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्छन । सवेरै उठेर सबैलाई चिया वा पानी दिने उनको बानीले दिनभर उनीसंग परिवारको सकारात्मक चिन्तन पैदा हुन्छ । यसैको कारण परिवारमा उनको महत्व बढ्छ । ढिला सुत्ने महिला अल्छी हुने हुँदा सबैको नजरमा नकारात्मक बन्छन । त्यस्ता युवतीलाई परिवारले त्यति मायाँ पनि गर्दैनन् । अल्छी युवतीले घर पनि सफा राख्दैनन् । घरमा लक्ष्मीको कृपा बनाईराख्नको लागि सरसफाई निकै जरूरी हुन्छ । साथै अवेरसम्म सुत्ने महिलाहरु सारीरिक रुपमै निकै कम्जोर हुन्छन । बिहान अवेरसम्म सुत्दा दिनभर थकानको महशुश हुन्छ । अवेरसम्म सुत्ने महिलाहरुलाई कयौं रोग पनि लाग्न सक्छ । त्यसैले भुलेर पनि यस्ता स्वभाव भएकी युवतीसँग बिबाह नगर्नुस । साझा सबालबाट